Nema 4x ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > Nema 4x ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
Nema 4x ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
မေး-510N စီးရီး nemတစ်ဦး 4x ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ရှိ ကျစ်လစ်သော ဒါပေမဲ့ အားကောင်းတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ညီ သို့ ပေါကျကှဲခွငျး-အထောက်အထား stနှင့်တစ်ဦးrd.AOX ရှိပါတယ် ဖူး ကတိသစ္စာပြု သို့ အဆိုပါ ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော nemတစ်ဦး 4x ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော နှင့် ထိန်းချုပ်မှု equipment.It ဖြစ် thဖြစ် အောင်မြင်သော positioning ကို နှင့် အားကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး အသိအမြင် ၏ အားလုံး ဖြစ်စဉ် ဝန်ထမ်းများ ထို ကြောင့် AOX တစ်ဦး ကုန်သွင်းသူ ၏ vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion ဖြေရှင်းချက်။
ဝင်း: Exd II ကို CT6
ambient အပူချိန် -20 â ~ + 80 â
ပြွန် Entries နျ စံ: နှစ်ဦး 1/2 "NPT
terminal မြှောင် 8 အမှတ်
ပြင်ပ Coating အပူခိုင်မာ polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း
မေး-510N စီးရီး nema 4x ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကို box ရဲ့ 1. ဝါယာကြိုး terminal ကို
2. Visual အနေအထားကိုညွှန်ပြချက်
မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုအသုံးပြုပြီးစီးရီး nema 4x ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကို box ကိုချေး-ခံနိုင်ရည်ပွင့်လင်း polycarbonate ပစ္စည်း,-510N အမေး။
3. လျင်မြန်စွာ-set cam, ချိန်ညှိ cam spline နှင့်နွေဦးပေါက်နေဖြင့်ထည့်သွင်း
switch cam အနေအထားလျင်မြန်စွာ tools တွေမပါဘဲချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်
Exd II ကို CT6
-20â ~ + 80â
-40â ~ + 100â
2-PT3 / 4A
NTP3 / 4A
ကမ်ာဘလုံးခွမျး 0Â° ~ 90Â°
3 လမ်း L-type ကို T-type ကို
2-SPDT စက်မှု switch ကို
နီးကပ်ခြင်း အာရုံခံကိရိယာ (P & F ကို, AUTONICS)
အခင်အရှင် အနေအထား transmittre
1. ကျွန်တော်တို့သည်အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများကိုတစ်ပြည်နယ် R & D ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစင်တာရှိအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်နှင့်မေး-510N စီးရီး nema 4x ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုလက်စသတ်နိုင်ပါတယ်။
2. ကျနော်တို့အနေနဲ့ informationization ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း, ကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်မ oa စနစ်, ERP စနစ်, CRM system ကို, မေး-510N စီးရီး nema 4x ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကို box ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုအရည်အသွေးကိုရှိသည်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေးမေး-510N စီးရီး nema 4x ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏အမေး-510N စီးရီး nema 4x ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာသို့မဟုတ်အထုပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီရနိုင်မလား?
hot Tags:: Nema 4x ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
sensor ပွောငျးလဲ ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
နီးကပ်ခြင်း ပွောငျးလဲ ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
2 အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
အခင်အရှင် အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator